माओवादी महाधिवेशनमा सीपी मैनालीको प्रश्न : ‘त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्‍यो ?’ « News24 : Premium News Channel
माओवादी महाधिवेशनमा सीपी मैनालीको प्रश्न : ‘त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्‍यो ?’
काठमाडौं । नेकपा (माले)का महासविच सीपी मैनालीले एउटा चिजका लागि आन्दोलन गरेको भएपनि अर्कै चिज प्राप्त भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आइतबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ८औं महाधिवेशनका लागि शुभकामना दिन गएका मैनालीले एउटा चिजका लागि आन्दोलन गरेको भएपनि अर्कै चिज प्राप्त भएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
त्यस्तै उनले त्यस्तो किन भयो ? भनेर समीक्षा गर्न पनि माओवादीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलबाट किन अर्कै प्राप्त भयो ? त्यो घोषित लक्ष्य किन पूरा भएन ?’
उनले थप प्रश्न गरेका छन्, ‘एउटा लक्ष्य प्राप्तीको निम्ती सुरु गरिएको एउटा आन्दोलन जसको निम्ती राष्ट्र र जनताले अकुत बलिदान गरेका छन् । नमेटिने गरी जिज्ञासाहरु उठिरहेका छन् किन ? किन त्यो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएन ? त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्‍यो ? समयले जवाफ खोजिरहेको छ ।’
यस्तै उनले जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीले आफूपट्टि उभिएका यस्ता प्रश्नहरुबाट मुख मोडिइरहन सक्छ र ? भन्दै थप प्रश्न गरेका छन् । उनले फेरि भनेका छन्, ‘माक्र्सवाद उत्पीडित जनता र उत्पीडित राष्ट्रहरुको पक्षधर, सर्वाहारा वर्गीय विज्ञानसम्मत सिद्धान्त हो । बीचमा उत्पीडक शासकहरुद्वारा सञ्चालित राज्यहरु पनि छन् । आन्दोलनले उत्पीडित राष्ट्रलाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन भन्ने माक्र्सवाद सिद्धान्त विपरीत काम गरिरहेकाले कसरी आफू २४ क्यारेट माक्र्सवाद हो भनेर आफूलाई दाबी गरिरहेको छ ?’